Laba Xidig Oo Muhiim Ah Oo Seegi Kara Kulanka Liverpool Iyo Napoli Iyo Carlo Ancelotti Oo Ay Madax Xanuun Ku Noqon Karto. - Gool24.Net
Laba Xidig Oo Muhiim Ah Oo Seegi Kara Kulanka Liverpool Iyo Napoli Iyo Carlo Ancelotti Oo Ay Madax Xanuun Ku Noqon Karto.
Kooxaha Liverpool iyo Napoli ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah isku guruub kaga jira tartanka UEFA Champions League waxayna kulankooda furitaanka ee xili ciyaareedkan wada yeelan doonaan talaaada todobaadka sabtida ka bilaamaya.
Liverpool waxay guuldaro 1-0 ah kala soo laabtay kooxda Napoli xili ciyaareedkii la soo dhaafay ee ay ku soo guulaysteen koobka Champions League wuxuuna ka mid ahaa saddex guuldaro oo Reds soo gaadhay.
Laakiin ka hor kulanka talaadada ay kooxaha Liverpool iyo Napoli kuwada ciyaari doonaan garoonka San Paolo Stadium waxaa Carlo Anceloti walwal ku haya taam ahaanshaha laba xidig oo kooxdiisa muhiim u ah.
Lorenzo Insigne oo xili ciyaareedkii la soo dhaafay ahaa xidigii Napoli guusha xiliga danbe ahayd ku hogaamiyay kulankii Liverpool ayaa shaki la galinayaa taam ahaanshihiisa kulanka talaadad.
Lorenzo Insigne oo sidoo kale Liverpool shabaqa ka soo taabtay kulankii xagaagan ayaa maanta oo arbaca ahayd awoodi kari waayay in uu tababar buuxa qaato iyada Football Italia ay sheegeen in Insigne uu kalidii tababar qaadanayay.
Laakiin walwalka Carlo Ancelotti ee ka hor kulanka Liverpool ayaan ku koobnayn taam ahaansha la’aan Lorenzo Insigne oo kaliya balse waxa uu dib u dhac kale ku yimid gool dhaliyaha kale ee Arkadiusz Milik .
Arkadiusz Milik waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii kooxda Napoli ee walwalka badan ku hayay Liverpol kulankii Anfield iyada oo la xusuusto goolkii uu Alisson Becker waqtigii dhamaadkii kulankii Anfield uu ka beniyay Milik.
Arkadiusz Milik waxa uu mudo bil ah ku maqnaa dhaawac laakiin sida lagu sheegay Football Italia, waxa uu xidiga reer Poland wajahayaa dib u dhac kale iyada oo hadda shaki wayni uu ku jiro in uu waqti dhaw soo laaban karo.
Arkadiusz Milik ayaa si buuxda loo filayaa in uu seegi doono kulanka Liverpool iyada oo Ancelotti uu sugi doono haddii Lorenzo Insingne uu fursad u heli doono kulanka Reds.